Yakawanda Yekurima Silicone Inoparadzira Wetting Agent SILIA2008 Mafekitori nePricelist | Honneur
Kurima Silicone Kuparadzira Wetting Agent SILIA2008
SILIA-2008 Kurima Silicone Kupararira uye Wetting Agent
Yakasarudzika kushushikana （25 ℃, 0,1%, mN / m）: <20.5
ndeye polyether trisiloxane yakashandurwa uye mhando yeSilicone suragineant ine super kugona kwekuparadzira uye kupinda. Inoita kuti mvura yemvura tension ive pasi kusvika kune 20.5mN / m pakukwira kwe1,1% (wt.). Mushure mekusanganisa nemushonga wekuuraya zvipembenene pane chimwe chikamu, chinogona kudzikisa ngirozi yekusangana pakati pekupfira nemashizha, ayo anogona kuwedzera kufukidza kwekupfira. SILIA-2008 inogona kuita kuti chipembenene chiwedzere
kuburikidza nerestatal yemashizha, ayo anonyanya kushanda mukuvandudza mashoma, kudzikisa huwandu wehutachiona, kuchengetedza mutengo, kudzikisa kusvibiswa kwezvakatipoteredza kunokonzerwa nemishonga
Kuti kuderedze mwero wechipatara chekupemha mushonga
1. inogona kushandiswa sepombi yekudyira: SILIA-2008 inogona kuwedzera kuvharirwa kweanopfira mumiriri, uye kusimudzira kutora uye kuderedza dosage yeanosvina mumiriri. Iyo SILIA-2008 ndiyo inonyanya kushanda kana musanganiswa wekupfira uri
(ii) gadzira musanganiswa wekupuruzira nekushandisa nekukasira kana mukati me 24h kugadzirira.
2. inogona kushandiswa muhurongwa hwekurima: SILIA-2008 inogona kuwedzerwa mune yekutanga mishonga yekuuraya zvipuka.
1) Inoshandiswa kupuruzira yakasanganiswa mune chigubhu
Pazvakawanda, wedzera SILIA-2008 (4000 times) 5g mune imwe neimwe 20kg fura. Kana ichida kusimudzira adsorption ye systemic pesticide, kuwedzera basa remishonga yekuuraya zvipuka kana kuderedza huwandu hwekupurasita mberi, inofanirwa kuwedzera huwandu hwekushandiswa nemazvo. Kazhinji, huwandu hwayo hunotevera.
Dyara kusimudzira chinodzvinyirira: 0.025% ～ 0.05%
Hutachiona: 0.015% ～ 0.05%
Fertilizer uye unoteedzera chinhu: 0.015 ～ 0,1%
Paunenge uchishandisa, tanga kupusha mushonga wekuuraya zvipuka, wedzera SILIA-2008 mushure mekusanganisa yunifomu yemvura 80%, wobva wawedzera mvura ne100% uye wovasanganisa zvakafanana. Zvinorayirwa kuti kana uchishandisa Kurima Silicone Kupararira uye Kupinda Mumiririri, huwandu hwemvura hwakaderedzwa kusvika 1/2 hwezvakajairwa (zvakataurwa) kana 2/3, pakati pekushandisa mushonga wechipfuva wakaderedzwa kusvika 70-80% yakajairika. Kushandisa iyo diki yemupendero musvinu kuchawedzera kukurumidza kupuruzira.
2) Inoshandiswa Yekutanga Pesticide
Kana chigadzirwa chakawedzerwa kune yekutanga mishonga yekuuraya zvipuka, isu tinokurudzira huwandu uhu ndeye 0.5% -8% yeiyo yekutanga mishonga yekuuraya zvipuka. Rongedza kukosha kwePP yeiyo mishonga yekuuraya zvipuka kuna 6-8. Mushandisi anofanirwa kugadzirisa huwandu hweKurima Silicone Kupararira uye Kupinda Mumiriri maererano nemhando dzakasiyana dzehutachiona hwehutachiona uye mishonga yekuwana iyo inonyanya kushanda uye yakanyanya hupfumi mhedzisiro. Ita zvinoenderana bvunzo uye nhanho bvunzo pamberi pekushandisa ..
Yepfuura: Kurima Silicone Kuparadzira Wetting Agent SILIA-2001
Inotevera: Kurima Silicone Kuparadzira Wetting Agent SILIA2009